Abathengisi bachitha inkoliso yeeholide zabo bezotyelwe kwaye betyholwa ngokuthengisa ixesha lonyaka. Emva kokubukela abatshana bam bejonga i-NORAD ngenkqubela phambili kaSanta kwihlabathi liphela, ndacinga ukuba kufanelekile ukubonakalisa igalelo elifanelekileyo lokuthengisa kwixesha leholide.
Nangona isinxibo esibomvu nomhlophe sikaSanta Claus yayiqhelekile iminyaka embalwa, UHaddon Sundblom wayiqinisa le nguqulo ngokwenza uthotho lwemifanekiso yeCoca-Cola kwiminyaka yee-1930. Ekuqaleni yayenzelwe ukunceda ukuthengisa isoda ekuhambeni kwimozulu yasebusika, umzekeliso kaSundblom wakhula ekuthandeni kwaye wanceda ukukhuthaza lo mfanekiso weSanta.
Njengoko sonke sisazi, uRudolf i-Red-nose Reindeer ukhokela isileyi sikaSanta. URudolf wadalwa ngumbhali-mbhalo kwiWadi yaseMontgomery. Inkampani ibizama ukugcina imali kwincwadi yabo yonyaka yokufaka imibala, kwaye bagqiba kwelokuba bazenzele ezabo. URobert L.May wenze ibali kunye nesicengcelezo, esasasaza iikopi ezizizigidi ezi-2.4 ngo-1939. Usibali kaMay kamva wadibana noGene Autry ngo-1949 ukuyila ingoma, kusenokwenzeka ukuba ubucula wonke lo mhlathi.
Abatshana bam bayakwazi ukulandelela indlela yonyaka yaseSanta, kuba ivenkile iSears Springs-based Sears yapapasha isibhengezo esithi, “Hee, ziintsana zam! Nditsalele umnxeba ngqo kwaye uqiniseke kwaye ucofe inombolo echanekileyo. ” Ngelishwa, uSears wapapasha inombolo engeyiyo yeSanta, eyangena kwiziko lokusebenza kweCONAD. UColonel Harry Shoup uyalele abaqhubi kwi-CONAD, ngoku eyaziwa ngokuba yi-NORAD, ukuba bachonge indawo abakuyo uSanta kubo nabaphi na abantwana ababizayo-ngoku sele beneminyaka eyi-50, isithethe siyaqhubeka.
Ngomoya weeholide, masixolele ezo ngcinga zentengiso eyingozi- kwaye sibulele abo basincedileyo sivelise izithethe zeholide? Mnu Sundblom, Mnu May, Sears kunye ne-NORAD. Iholide ezimnandi!
tags: Usetyenziso lwe-google analyticsgoogle docsumthamo wegama elingundoqoIindwendwe ezizodwautyelelomhlophe
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2009 ngo-10: 06 PM
USanta esimaziyo namhlanje khange enzelwe iCoca-Cola. Isalathiso sakho snopes.com sichaza oku. Ndiva impikiswano encinci kunye / okanye ukudideka malunga nemvelaphi yeSanta yanamhlanje. Ndifundile oku kuYilo olungenamda: http://jillharding.com/blog/2009/coke-brand-santa-claus/.